The amụma obodo nke Jerusalem | Apg29
The amụma obodo nke Jerusalem
Kraịst ọ bụla kwesịrị ịhụ Jerusalem si amụma anya.
Chineke m họọrọ Jerusalem. Of niile obodo na ụwa bụ obodo a na ọ họrọ.
Lee amụma nke Jerusalem
Kraịst ọ bụla kwesịrị ịhụ Jerusalem si amụma anya. Ọ bụrụ na anyị na-eme, anyị ga-aghọta na atumatu Chineke maka obodo a.
Mgbe US ghọtara Jerusalem ka Israel isi obodo guzo Jeremaya mere nwamba na nkịta. The ụwa dum ga-o doro anya na ha ikwu okwu banyere ya. Si elu na ala, si statesmen ka ọrụ na nri ehihie ụlọ kwurịta ihe merenụ.
O yiri ka ọ bụ ihe dị mkpa nke na-emetụta onye ọ bụla. Na a ụzọ, ọ bụ, ka anyị na-akọwa. Ọ bụrụ na ọ ama banyere ihe ọ bụla ọzọ obodo emeghị inye aka na ọtụtụ, ma ọ bụ Jerusalem, na ọ bụ doro anya na nke mere na e a njikọ ka ndị mmadụ na mba dị iche iche gburugburu ụwa.
Njikọ nke Chineke dị ndụ
Mgbe anyị na-ahụ ya, ọ dị oké mkpa na-aghọta na e nwere njikọ Chineke ahụ dị ndụ, kwa. O kwuru na ọ họọrọ obodo a, na-agụ: 1 kgs. 11:36, 2 Chr. 6: 6 na Sak. 3: 2.
1 Eze. 11:36. Rue nwa-ya ka M'gēnye otù ebo, ka Devid, bú orùm, we mgbe niile nwere a oriọna n'ihu m na Jeruselem, obodo nke m họọrọ m ka m na-etinye aha m n'ebe ahụ.
2 Chr. 6: 6 Ma Jerusalem m họọrọ ka aha m na-ahụ, na m họọrọ Devid ka ọ bụrụ onyeisi nke ndị m Izrel.
Zek. 3: 2. Ma Onyenwe anyị sịrị Setan: "Onyenwe anyị ga-abara gị mba, Satan. Ee, Chineke ga-elebara unu, ọ onye họọrọ Jerusalem. Ọ bụghị nke a a ika fopụrụ nke ọkụ?"
N'amaokwu ndị a anyị na-agụ na Chineke họọrọ Jerusalem. Of niile obodo na ụwa bụ obodo a na ọ họrọ.
Jesus ga-alaghachi Jerusalem
Chineke na-ama gosiri na ọ na-eme ya. O nwere Solomon wuru ulo uku nye onwe-ha na obodo a, o kwere ka nwa ya Jizọs na-anwụ anwụ n'ihi mmehie nke Jerusalem. Ma ọ ga-n'ihu na-etinye aha ya na Jerusalem. Ọ ga-eziga Jesus azụ obodo na ọ ga-etinye ụkwụ ya nọ n'elu Ugwu Oliv, Zek. 14: 4
N'ụbọchị ọ ga-ada ya n'ụkwụ Ugwu Oliv, nke ozo Jerusalem n'ebe ọwụwa anyanwụ. Na n'Ugwu Oliv ga-kewaa abụọ, site n'ebe ọwụwa anyanwụ ruo n'ebe ọdịda anyanwụ, ka nnukwu ndagwurugwu site nkera ugwu ga-ewepụ n'ebe ugwu na ọkara nke dị n'ebe ndịda.
Mgbe a laghachi na-ewe ebe, a ga-ịrịba ama, dị ka anyị na-ahụ n'amaokwu a. Na ihe a ga-eweta a dum ọhụrụ oge na akụkọ ụmụ mmadụ. Site na nke a obodo, Jesus ga-achị, Mika. 4: 7
M ga-eme ka enwe ibu a fọdụrụ, ha natara n'ebe dị anya ike mba, Jehova ga-achịkwa ha n'Ugwu Zayọn, malite ugbu a ruo mgbe ebighị ebi.
Ndị a na Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na-egosi na a doro anya na-elekwasị anya na atụmatụ na Chineke nwere n'ihi na Jerusalem site na afọ. Anyị bi n'oge anyị na a pụrụ iche na-adọ nke atụmatụ a. Ebe ọ bụ na ndị Juu nwetaghachiri ma ya na obodo na obodo nke Jerusalem, ọ ga-eduga ndị ọzọ dị ịrịba ama mere nke anyị nwere ike ugbu a eche na ha na-eru nso.
Jerusalem a cup of jijiji
E nwere n'ezie na nkọwa ndị ọzọ na-ekpughe okwu amụma na ọ bụ na-alụ na a na-aga ma na-aga banyere obodo. Nke a bụ ihe Chineke kwuru site Zekaraịa onye amụma:
"A amụma, okwu Jehova banyere Israel. Otú a ka Jehova, Onye setịrị eluigwe na tọrọ ntọala ụwa na kpụrụ mmụọ mmadụ na ya, Le, m ga-eme ka Jerusalem otu iko enyek mmadụ niile gburugburu. Juda ga-ata ahụhụ, mgbe Jerusalem gburugburu. "Zek. 12: 1.
Nke a nwere ike ugbua ike sị mere. Anyị hụrụ otú gburugburu mba chọ Jerusalem kemgbe 1948.
Jerusalem bụ Israel isi obodo
Ma n'amaokwu nke ọzọ, anyị na-ahụ na ọ bụghị naanị na mba ndị agbata obi egbochi ná mbipụta nke Jerusalem:
"Ọ ga-eme n'ụbọchị ahụ na m ga-eme ka Jerusalem oké nkume n'ihi na iche iche. Onye ọ bụla nke na-abọli ọ ga-emerụ onwe ha na ya. Na onye ọ bụla n'ụwa a ga-zukọtara megide ya. "Zek. 12 abụọ
Fọrọ nke nta ka ụwa dum chigharia imegide ndi UN na Jerusalem bụ Israel isi obodo. The agha megide Jerusalem ugbu a banyere a isi ọhụrụ na-adọ.
Ndị Juu na-aghọta na Jizọs bụ Mezaịa ahụ
N'otù isi, Zekaraya. 12, amaokwu nke 10, anyị na-ahụ otú Jizọs alaghachi na ndị Juu na-aghọta na ọ bụ ya bụ ha Messiah.
The ụlọ Devid na ndị bi na Jeruselem, m ga-awụkwasị amara na-arịọsi ike Mmụọ, nke mere na ha na anya aka m dị ka ha eduat. Ha ga-eru uju ya dị ka otu mourns maka na nwa nwoke, na ha ga-akwa ákwá n'ụzọ dị ilu n'ihi ya dị ka onye ofụhọ a bu ụzọ mụọ nwa.
Amụma Zekaraya akwụkwọ ugbu a na-arahụ a nzọụkwụ ọzọ end-emezu. Ọ bụ ugbu a na-eme gburugburu Jerusalem amalite nzukọ ndị amụma na foto.
The uru nke ọ bụ nke anyị na-eche ihu na-esote nnukwu ihe omume na a kọwara na-akpata. 12, na Jizọs laghachi. Ọ bụ oge na-aghọta amụma ihe okwu pụtara.
Isiokwu a bụ a guest blog onye echiche na-ede akwụkwọ si onwe.